တရုတ်စက်ရုပ် HY-1010B-140 ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းသူနှင့်ထောက်ပံ့ပေးသူ | Yunhua
HY-1010B-140 စက်ရုပ်သည်စက်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အဓိကအသုံးပြုလေ့ရှိပြီးအစာကျွေးခြင်း၊ အလွတ်ချုပ်ခြင်း၊ စက်ကိရိယာများနှင့်စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများပြောင်းလဲခြင်းအကြားပြုပြင်ခြင်းနှင့်အလှည့်အပြောင်းများ၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်းနှင့်အခြားသတ္တုဖြတ်စက်များနှင့်အလိုအလျောက်ပြုပြင်ခြင်း။ စက်ရုပ်သည်အလိုအလျောက်အစာကျွေးနေသောဆီလိုဗေ့စ်တင်ကြိုးဖြင့်အလိုအလျောက်တင်ဆောင်ခြင်းနှင့်ချခြင်းစနစ်ကိုအောင်မြင်စေသည်
စက်မှုစက်ရုပ်တင်ခြင်းနှင့်ချခြင်းကိုခုံပြုခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာ CNC ခုံ၊ စက်စင်တာ၊ ပန့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းများကိုယူခြင်း၊ နို့တိုက်ကျွေးခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်းစသည်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လက်တွေ့တွင်အလိုအလျောက်တင်ခြင်းနှင့်ချခြင်းစက်ကိုစက်မှုထုတ်လုပ်မှုတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှု၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအလုပ်၏အားသာချက်များရှိသည်။
စက်ရုပ်ကိုရွေးရန်နှင့်နေရာအတွက်အသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်တစ်ခုမှာအလုပ်သမားများကိုဒဏ်ရာမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ အလုပ်သမားတစ် ဦး သည် ၅ မှ ၆ ယူနစ် CNC စက်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
A. စက်ရုပ်စက်စက်တစ်ခုစီကိုသင့်စက်နှင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောသင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအဆုံးတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်တိကျပြီးအစိတ်အပိုင်းကိုဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်ရန်လည်းကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်။
စက်မှုစက်ရုပ်လက်မောင်းသည်ပရိုဂရမ်နှင့်ချုပ်ကိုင်ထားမှုကိုပြုပြင်နိုင်သည်၊ အသိဥာဏ်သိုလှောင်ခြင်းတွင်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခြင်း၊ အမြန်နှုန်းကိုပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း၊ ၀ န်ထမ်းများလိုအပ်ချက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းကာလအတွက်လည်းလျင်မြန်စွာထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
A. အလုပ်ပြီးသောအရည်အသွေး၏အရည်အသွေးတိုးတက်လာပုံပန်းသဏ္:ာန်ဖြင့်ချိတ်ဆက်မှုကိုလျှော့ချရန်အစာကျွေးခြင်း၊ ညှပ်ခြင်း၊ စက်ရုပ်ဖြင့်အဖြတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အလယ်အလတ်ချိတ်ဆက်မှုဆက်သွယ်ခြင်းများကိုလျှော့ချရန်စက်ရုပ်အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည့်စက်များ၊ အစိတ်အပိုင်းအရည်အသွေးသည်အထူးသဖြင့်ပိုမိုလှပသောမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။
A. သေချာတာပေါ့၊ ငါတို့ရောင်းဝယ်သူနဲ့အတူတူလုပ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု: TIG စက်ရုပ်ဂဟေ